İzmir’de Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı Yapıldı – RayHaber | raillynews
[12 / 01 / 2020] Eskişehir wuxuu rabaa inuu cod ku yeesho Nidaamka Tareenka oo leh 'Model Wadajir'	26 Eskisehir
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirRugta Nabadgelyada ee Nabadgelyada ee Iskudhiga ah ee Izmir
31 / 07 / 2018 35 Izmir, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
Aqoon Isweydaarsi ku saabsan Nidaamka Gaadiidka Intelligent biiray Ergada Midowga Yurub ee dalka Turkiga ee Izmir-xigeenka François Begeot, "sida aad ka tagto our dhaleen jawi nadiif ah waxaa saaran mas'uuliyad weyn. Dowladda Hoose ee Magaalada Izmir waxay u shaqeyneysaa halgankaan adag; codsiyada mustaqbal leh. Izmir, magaalo ka mid ah, waxay horyaal u ah in Turkey. Kaliya maahan quruxdeeda, waxay sidoo kale soo jiidataa dareenka iyada oo ah magaalo hal-abuurnimo. ”
İzmir wuxuu martigeliyey Seminaarada Nidaamka Gaadiidka ee Smart, kaas oo diiradda lagu saaray xallinta dhibaatooyinka gaadiidka ee magaalooyinka diiradda saaraya gaadiidka dadweynaha, taraafikada iyo kaabayaasha gaadiidka. Izmir degmada Metropolitan iyo Ergada Midowga Yurub ee Turkey abaabulay kaashanaya "Izmir on Workshop Intelligent Systems Transport (aus)" halka dib u qaab-dhismeedka gaadiidka jira n in in Izmir, waxaa lagu soo bandhigay in ku dhaqanka ugu fiican ee caalamiga ah, waxaana uu ka dhigay waxbarashada qiimeeyo mashruuca qorshaysan Gaadiidka Intelligent System in Izmir.
Ergada Turkey EU-taliyaha François Begeot la Baanka Adduunka Architecture Gaadiidka Intelligent iyo Soo Celinta Specialist Dr. Khaled El Araby wuxuu kaloo kaqaybgalay khudbadii furitaanka Xoghayaha Guud ee Dowlada Hoose ee Magaalada Izmir Dr .. Buğra Gökçe wuxuu cadeeyay in daraasado taxana ah lagu sameeyay Nidaamka Gaadiidka Smart wuxuuna yiri, uz Waxaan sameyneynaa siyaasado cusub oo dhiiri galinaya gaadiidka dadweynaha. Waxaan leenahay ikhtiyaar ah in mudnaanta la siinayo xarumaha magaalooyinka si loogu dhaqaaqo dhanka lugeeyayaasha iyo gaadiidka baaskiilka. horyaal A ee Izmir, Turkey, ayaa lagu qabtay shaqo lagu dayan karo. Waxaan ku dhisi qaab dhismeedka guud fikirka guud ee yareynta qiiqa kaarboonka.
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, 2020'e Ballanqaadkii 'dhimista boqolkiiba 20 ee kaarboonka' ayaa fulineysa ballanqaadka talaabo talaabo ah.
KA HADAL MACLUUMAADKA İZMİR KU SAABSAN HER
Mehmet Ali Bodur, waaxda taraafikada iyo baarista ee ismaamulka magaalada Izmir, ayaa kaqeybgalayaasha ogeysiiyay Nidaamka Gaadiidka Sirdoonka iyo xaalada hada ee laga hirgaliyay Izmir.
Borofisar ku takhasusay Gaadiidka iyo dib u soo celinta Sirdoonka ee Bangiga Aduunka. Khaled El Araby, ayaa sheegay in marka hore uu gaadiidka Izmir, Izmir yimid, sida magaalo kasta ee Turkey, ayaa sheegay in kaarka hal noqonayaan ansax. El Araby wuxuu xasuusiyay in dhibaatadan ay horay khibrad ugu lahayd midowga yurub, laakiin hada ay tahay hal nooc kaar. Olarak Sida Bangiga Aduunka, waxaan bixinaa taageero farsamo. Waxaan sidoo kale sameynay daraasado ku saabsan fiber optic-ga. Izmir waxay leedahay shabakadda ugu weyn ee fiber optic-ga shabakadduna waxay leedahay qaab ka duwan Waxaan ka hadlaynaa shabakad caqli badan. Sida magaalo caqli badan, waxaan kugula talinayaa inaad tusaale u qaadato Izmir oo aad u dhawaato.
IZMIR WAA KELIYA KALIYA, QOYSAN, OO KELIYA
hadal in uu yahay mid aad u faraxsanahay inaan imaado magaalada Izmir, Hadalkan ayaa Ergada Midowga Yurub ee dalka Turkiga, François Begeot "Izmir furato dadka. İzmir kaliya ma soo jiito dareenkiisa quruxdeeda laakiin sidoo kale wuxuu la socdaa magaaladiisa cusub ee hal-abuurka ah. ”
21 oo ku saabsan mowqifka deegaanka ee gaadiidka iyo wax soo saarka. Begeot wuxuu caddeeyey inay isku dayeen inay ka gudbaan dhibaatooyinka oo dhan qarnigii 18aad:
Masuuliyad weyn ayaa na saaran. Waxay lamid tahay sida looga tago deegaan nadiif ah caruurteena iyo awoowayaashayada Gaar ahaan degmada İzmir ee Caasimaddu waxay u shaqeysaa halgankaan adag; codsiyada mustaqbal leh. Waxa jira wax ka duwan Izmir. Gobolkani wuxuu leeyahay dabeecad u gaar ah. Waxaan u tegey meelo badan laakiin waxaan u maleynayaa Turkey ee Izmir waa mid gaar ah. Izmir waa magaalo, waxay horyaal u ah in Turkey. İzmir waa dhinaceena xagga ixtiraamka deegaanka iyo waliba waxkastoo kale. İzmir sidoo kale waa nin ku hormaray wadista baaskiilka iyo ururkiisa. ”
RayHaber 31.07.2018 Warbixinta Shirka